IHodges U Ebizwa Nge-2020 Engcono Kakhulu KwamaVets College yi-Military Times
IHodges University ibizwa ngegama elihle kakhulu lamaKholeji amaVets nge-Military Times ye-2020
IHodges University iyabakhathalela omakadebona bethu futhi iyakhombisa. I-Military Times ibonakala ivuma, ikhetha iHodges University njengenye yamakolishi ayi-134 ukwenza uhlu lweBest For Vets lwango-2020. Futhi, lona unyaka wethu wesithathu ukuthola le ndumezulu.
Kungani AmaHodges Engcono Kakhulu Kwezilwane Ezifuywayo?
Sinikela ngezikhungo ezizinikezele zikaDkt Peter Thomas Veterans Services ezikhungweni zethu zaseNaples naseFort Myers ezinamagagasi, zezingqalabutho.
Izinhlelo zethu zeziqu ngabasebenzi abagxile emisebenzini abafisa ukulandela omakadebona abaningi.
Siletha izinsuku zokuqala nyangazonke zezifundo ezihlangabezana nezidingo zohlelo lwamavetera.
Izindawo zokupaka ezikhethekile ezibekelwe omakadebona bethu ekhempasini ngayinye.
Ukuze ufunde kabanzi ngokuthi kungani iHodges U ingcono kumaVets, funda yonke i-athikili ku IFlorida Masonto onke.
Tags: amakolishi amahle kakhulu omakadebona, HodgesU, Amakolishi Omakadebona, Amanyuvesi Omakadebona